အင်းလေးကန် အတွင်းရှိ အင်းလေး ဖောင်တော်ဦးဘုရား ၀န်းကျင်တွင် စံချိန်တင် ရေခန်းခြောက်မှုဖြစ်ပေါ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ﻿ အင်းလေးကန် အတွင်းရှိ အင်းလေး ဖောင်တော်ဦးဘုရား ၀န်းကျင်တွင် စံချိန်တင် ရေခန်းခြောက်မှုဖြစ်ပေါ်…
﻿ အင်းလေးကန် အတွင်းရှိ အင်းလေး ဖောင်တော်ဦးဘုရား ၀န်းကျင်တွင် စံချိန်တင် ရေခန်းခြောက်မှုဖြစ်ပေါ်…
Posted by lu ta lone on May 5, 2010 in Buddhism, Myanma News, News, Other - Non Channelized, Photography |5comments
လူတလုံး အာဘော်... ﻿ အင်းလေးကန်
ယခုနှစ်တွင် ရာသီဥတုပူပြင်းပြီး မိုးမရွာသဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း အင်းလေးဒေသ အင်းလေးကန်အတွင်းရှိ အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရားဝန်းကျင်တွင် စံချိန်တင် ရေခန်းခြောက်မှု ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ ကြောင်းဒေသခံများထံမှ သိရှိရပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း အင်းလေးဒေသရှိ ဖောင်တော်ဦးဘုရား ၀န်းကျင် ရေခန်းခြောက်မှုရှိခဲ့သော်လည်း ဘုရားခြေတော်ရင်းလှေကား ထစ်လှေဆိပ်အထိ စက်လှေ မော်တော်များ သွားလာနိုင်ပြီး ရေကျ၍ ကုန်းပေါ်လာမှုကြောင့် စက်လှေပေါ်မှဆင်းပြီး ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်သို့ တက်ရန် ပေ ၂၀ မှ ပေ ၄၀ အထိသာ လမ်းလျောက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။
”အင်းလေး ကန်မကြီးတစ်ခုလုံးပဲ ခန်းခြောက်ကုန်တယ် ပြောနေကြလို့ ကိုယ်တိုင်အင်းထဲကို ဆင်းပြီး လာကြည့်တာပါ။ ရာသီဥတုပူပြင်းပြီး မိုးမရွာလို့ ကန်မကြီးမှာ ရေချိန်ပေ တော်တော်ကျသွားပေမယ့် အလျားငါးမိုင်၊ ခြောက်မိုင် အနံ နှစ်မိုင်၊ သုံးမိုင်လောက် ကျယ်တဲ့ အင်းလေးကန်မကြီးမှာ ရေအပြည့်ရှိနေပါသေးတယ်။ အင်းလေးကိုသွားတဲ့ ချောင်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ နမ့်ကတ်ချောင်း၊ အမှတ်(၁)ချောင်း၊ အမှတ်(၂)ချောင်းတွေရဲ့တချို့နေရာ တွမှာ ရေအနက်တစ်ပေခွဲ၊ နှစ်ပေ လောက်အထိ ရေကျသွားပေမယ့် စက်လှေမော်တော်တွေမောင်းလို့ ရပါသေးတယ်။ စက်လှေမောင်းသူ ရဲ့ ရေလမ်းကြောင်းကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ညောင်ရွှေဖောင်တော်ဆိုက် ဆိပ်ကမ်းကနေ ဖောင်တော်ဦးဘုရား ခြေတော်ရင်း လှေဆိပ်အထိ ရေမိုင်ဆယ့်သုံးမိုင်ကို ပဲ့ချိတ်မော်တော်စီးပြီးသွားခဲ့ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။ ရေကျခန်းခြောက်တာမို့ လှေဆိပ်ကနေ ဘုရားရင်ပြင်တော် အထိ မြောက်ဘက်ကဆို ၁၀ ပေကနေ ပေ ၂၀ လောက် အနောက်ဘက်ကဆို ပေ ၃၀ လောက်ပဲ လမ်းလျောက်ပြီး တက်ရတာပါ”ဟု တောင်ကြီးမြို့မှ ဘုရားဖူးလူငယ်တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရားကို ၂၀၁၀ပြည့်နှစ် ဧပြီလအတွင်းက တွေ့ရစဉ်
ညောင်ရွှေဆိပ်ကမ်းမှ အင်းလေးကန်မကြီး မြောက်ဘက်အ၀င်ဝအထိ နမ့်ကတ်ချောင်းလမ်းအတိုင်း ရေမိုင် လေးမိုင်၊ ကန်မကြီးမြောက်ဘက်အ၀င်ဝမှ တောင်ဘက်အ၀င်ဝအထိ ကန်မကြီးကိုဖြတ်၍ ရေမိုင် ငါးမိုင်ခွဲ၊ ကန်မကြီးတောင်ဘက် အ၀င်ဝမှ အမှတ်(၁)၊ (၂)ချောင်းလမ်းများဖြင့် ဖောင်တော်ဦးဘုရားခြေတော်ရင်း လှေဆိပ်သို့သုံးမိုင်ခွဲ စုစုပေါင်းရေမိုင် ၁၃ မိုင်ကို ပဲ့ချိတ်မော်တော်စီး၍ သွားလာနိုင်ကြောင်း၊ ဖောင်တော်ဦး ဘုရား အ၀င်၊ အထွက် ချောင်းများ ရေခန်းခြောက်မှုမှာ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော်အတွင်း ယခုတစ်ကြိမ်သာ ကြုံဖူးကြောင်း၊ ဖောင်တော်ဦးဘုရားသာမက နန်းပန်အလိုတော်ပေါက်ဘုရား၊ ငါးဖယ်ချောင်းကျောင်း(ကြောင်ခုန်ကျောင်းဟုလည်း ဒေသခံများကခေါ်)၊ ရက်ကန်းရုံ၊ ငွေထည်အလုပ်ရုံ၊ အခြား လက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း စက်လှေ မော်တော်ဖြင့် သွားရောက်ဖူးမြော် လေ့လာနိုင်ဆဲဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံတိုင်းရင်းသားကြီးတစ်ဦးထံမှ သိရှိရသည်။
ဟုတ်ပဗျာ…. ဒီနှစ်နွေက တော်တော်ကို ပူတယ်ဗျို့။
မနေ့က ရန်ကုန်ရဲ့ အပူချိန်က 46ံကို ပြနေတာ..
ဟုတ်တယ်ဗျို့… ပူတာကတော့ တကယ့်ကိုပူတာပဲ… တစ်နေကုန် ရေပဲ သောက်နေရတယ်… မနေ့ကလဲ ချွေးထွက်လွန်မှာစိုးလို့ ဓါတ်ဆားရည်သောက်နေရတယ်… သတိထား သင့်ပါတယ်ဗျာ…
ပူတာကတော့ တော်တော်ကိုပူတယ်ဗျို့ …. နေ့လယ်လမ်းထွက်ရင် မီးပုံဘေးမှာ ထိုင်နေရသလိုပဲ …. သစ်ပင်တွေကိုလည်းဂရုစိုက်ကြပါဦး … ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာထင်းတွေမီးသွေးတွေ တော်တော်ထွက်တယ် တောင်တွေလည်း ကတုံးတွေဖြစ်နေပြီ …. လူတွေက တုံးပေးထားတာလေ … ဒါ့ကြောင့် အရမ်းပူပြီး အင်းလေးကန်ကြီးတောင် ရေခန်းခြောက်သွားတယ် တောင်ပေါ်ဒေသမှာတောင် ဒီလောက်ပူရင် ကျွန်တော်တို့မန်းတလေးကအပူပိုင်းဒေသတွေဆို ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ….. ကယ်ကြပါဦး …………………
သင်္ကြန်တုန်းက တောင်ကြီးအင်းလေးဘက်လျောက်လည်တာ… အင်းလေးထဲရေသိပ်မရှိတော့… ကြောင်ခုန်ကျောင်းတို့ဘာတို့တောင် စက်လှေသွားမရလို့.. မသွားလိုက်ရဘူး..